Taariikhda My Butros » Sidee Stars saadaalin karaa Your Love AFURAAY
Sidee Stars saadaalin karaa Your Love AFURAAY
Last updated: Sep. 19 2020 | 3 min akhri
In falaga, waxaa jira wax la yidhaahdo shaxda ah dhalmada. Waa asal ahaan si dhekhso ah goobta saxda ah ee Burji oo dhan oo ka mid ah meerayaasha iyo hay'adaha kale ee Falag waa la joogo aad ku dhalatay meel aad dhalatay. Waa sida map a, dejineysa shakhsiyadaada iyo muujinaya waxa aad rabtid / u baahan in qeybaha kala duwan ee nolosha. Qof walba waa ogyahay in Venus waa meeraha ee jacaylka, oo calaamadda ayey ku yaal ee aad dhalashada ku siin kara fikrad waxa aad u baahan tahay in jacaylka. Maxay aad Venus idinku saabsan? (Haddii aad u baahan tahay si aad u ogaato calaamad Venus, riix halkan).
Venus in Aries: Waxaad u baahan tahay qof ku qaban karnaa dulsaar, ama aad ka guurto on dhakhso. Waa in ay waafaqayaan hamiday, oo lagu farxi oo ku saabsan nolosha. Waxaad soo jiidan kara kooxaha dad badan, laakiinse idinku taga iyaga si deg deg ah haddii aadan diiradda saaray waxa aad rabto. Waxaad si aad u hesho ee la soo dhaafay baahida xooggan ee had iyo jeer dareen brand-cusub in.
Venus in Taurus: Waxaad u baahan tahay qof deggan oo masuul ka. Haddii ay tahay duurjoogta ah oo goosgoos ah, aad socda habka kale. Waxaad jeclaan lahaa qof kale oo aad niyadjabsan yahay wax yar wax Hurdo nolosha, iyo qof kale oo u dhigma kartaa nooca saaidka. Waxaad qaadan marka aad dooranayso la Wadaage, iyo dalban go'an tahay wadarta. Iska ilaali in ay aad uga leeyihiin ama hinaasay.
Venus in Gemini: Waxaad u baahan tahay kicinta maskaxda oo dhan kale. Haddii aadan haysan kartaa Wadahadal fiican ayaa la qof, aad u warwareegayaan doonaa. Waxaad u baahan tahay qof kaas oo xiiso leh, nooca ah caqliga, laakiin yaa ka salaysnayn badan aad tahay si ay adiga iyo yariyo aad degi karo. Waxaad aadi kartaa qof ka yar naftaada ka badan, ama kuwa u dhaqmo da'doodu ka yar tahay ay yihiin.
Venus in Cancer: Waxaad u baahan tahay xiriir dareen leh qof ka sarreeya dhammaan kale. Waxaad doonaysaa in la Wadaage oo furi karin ilaa aad si niyad ahaan, taageero iyo dhiiri aad, balse sidoo kale waxaad riixi doonaa baxsan aagaaga raaxada. Xiriirka ka heli kartaa daymada haddii aadan qaadan fursado qaar ka mid ah oo aad la wadaagto si kasta oo inta badan. Iska ilaali xagleynta si aad u waalid ee xiriirka.
Venus in Leo: Waxaad u baahan tahay in aan xiddig ee xiriirka, si aad rabto in aad la Wadaage oo ku siin doona dareenka iyo ammaanayaa aad u baahan tahay. Waxaad noqon kartaa, hadayana jirin yar iyo jeer in jacaylka, laakiin aad tahay diiran oo dareen iyo sidoo, iyo la yaab leh oo daacad. Waxaad jeclaan lahaa jacaylka ay u noqon sida wax ka aad sheeko jacayl aad u jecel ama film, oo ay aad u taataabtay.
Venus in Virgo: Waxaad u baahan tahay qof wax ku ool ah oo masuul ka, iyo kuwa idin sii daynayaa inaad qaadato waqti aad. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in ay degdegin marka aad dooranayso in qof kale lala noqon, oo aad rabto in aad hubiso in ay xaq ugu horeeyay. Waxaad noqon kartaa mid ah xishood yar ee jacaylka, iyo iyaga oo u baahan kartaa in tallaabada kowaad. Waxaad u baahan tahay lammaane oo dejiyo dareemayaasha marka aad walwalo xiriirka.
Venus in Showgii: Waxaad u baahan tahay qof ka go'antahay qaadataa si dhab ah, maxaa yeelay, waxaad hubisaa sameeyo. Isla mar ahaantaa, aad u baahan tahay si ay u leeyihiin xaddi gaar ah oo boos in xiriir si uu u koro, oo aad rabto in aad qof kale oo fahmaya in xiriirka ka markastaba fiican ka heli karto. Waxaad mahad hindiga iyo chivalry, oo aad rabto in laguula dhaqmo si ixtiraam iyo sida siman ah.
Venus in Scorpio: Waxaad u baahan tahay qof dareen xoog leh laakiin baarada kartaa xoojinta, sababtoo ah waxaad noqon kara kuwo xambaarsan waqtiyada jacayl. Waxaad ka xirtid karaan ama ugu cuslaataan lammaanahaaga, dhaqmaan gacanta lagu ama melo, sidaa awgeed waa muhiim in aad ka shaqeeyaan in ka hor inta aan la qof ama iska aad ku qasbin doonaa. Waad soo jiito qof awood badan oo u muuqdaan kuwo xoog.
Venus in Sagittarius: Waxaad u baahan tahay qof awoodaa, bold, Wayna ku qosli kara in aad la. Jacaylka aadan qaadan aad si dhab ah, si aad u baahan tahay qof ka badan la taaban karo jacaylka, oo uusan iska sii badan aad dhumiyaa. Waxaad u baahan tahay xiriir jidh ahaan qof, oo u baahan in la xasuusto mid dareen aad u muhiim ah. Taas tusi kartaa bachelor weligeed / Bachelorette.
Venus in Capricorn: Waxaad u baahan tahay qof qaan, masuul ka, iyo xoogaa dhaqameed la jacaylka. Waad soo jiita dadka ku guulaysato, gaareyso ama waa ku sii socday loo xaqiijin lahaa xaalad sare ee nolosha, oo aad ka heli karto la-hawlgalayaasha ka weyn. Maadaama aad tahay qof si dhaqameed, waxaad isticmaali kartaa qof ku soo dejin doonaa uunsigii ay qaar ka mid ah si xiriir ah uusan ka heli duugowday.
Venus in Aquarius: Waxaad u baahan tahay qof qofka ay qofka u gaar ah, waxay leedahay shakhsiyad u gaar ah, iyo mid maskaxeed oo aad kulan. Jeceshahay inaad ula qof oo saaxiibbo u horeysay, iyo dareemaan inay saaxiibnimada waa aasaaska ugu fiican ee jacaylka. Dhibaatada waxa ay tahay, waxaad heli kartaa waqti adag socday baxsan saaxiibtinimada, si aad u baahan tahay qof ilaa aad furi doonaa dareen iyo soo dareenkuba.
Venus in Pisces: Waxaad u baahan yihiin cid fahanta baahida maanku, aad ilaalin doona marka aad dareento nugul, oo ma u qaadi doonto faa'idada aad ee. Waxaad sameyn doonaa wax qof aad jeceshahay, oo si fudud loo musuq maasuqay karo sababtoo ah in. In aad sida jaceyl ah ee wadnaha, aad u baahan tahay qof ka badan oo wax ku ool ah oo ku salaysnayn. Waad soo jiidatay noocyada farshaxanka.
Iidooyinka iyo Arrrimaha ka Dating Gabadh yar